एभिन्युज टेलिभिजनअर्थतन्त्रबारे हल्का टिप्पणी नगर्न संचार माध्यामहरुलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह - एभिन्युज टेलिभिजन
2 Ashwin 2076 Thursday 1:27 pm प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौं : अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले मुलकको अर्थतन्त्रबारे हल्का टिप्पणी नगर्न संचार माध्यामहरुलाई आग्रह गरेका छन् । आज काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा भन्सार विभागको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उनले अर्थतन्त्रको बुझाई त्यत्ति सजिलो नभएकोतर्फ संचार माध्यामहरुलाई सचेत गराएका हुन् ।
नीति, निर्माणको तहमा तीस वर्ष बिताएर पनि अर्थतन्त्रका कोरा सिद्धान्तहरु किन पालना हुँदैनन ? भन्ने आफुले नै बुझ्न नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रबारे नबुझिकन हल्का टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तहरु असफल हुँदै गएको र त्यसको ठाउँमा नयाँ सिद्धान्तको प्रयोग हुन थालेकाले अर्थतन्त्रको कुन मोडल ठिक हुन्छ ? भनेर एकीन गर्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।
उनले अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन भन्सारलगायतका शुल्कहरुको व्यवस्थालाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरामा पनि परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औल्याए । अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यापार घाटा बढ्दै गईरहेका बेला खुला अर्थतन्त्र मुलुकका लागि उपयुक्त हुने-नहुने बहसको विषय भएको उनको भनाइ थियो ।।